Home Breaking News विदेशमा यो साता कोरोना संक्रमणले १३ नेपालीको ज्यान गयो
लन्डन । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विदेशमा यो साता थप १३ जनाको ज्यान गयो । सबैभन्दा धेरै युएइमा रहेका नेपालीको ज्यान गएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तरर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार युएईमा थप ६ जना, भारतमा ५ जना, ओमानमा १ जना, कुवेत १ जना नेपालीको निधन भएको हो ।
समितिका अनुसार शनिबार साँझसम्म १४ देशमा संख्या १ सय ४३ जना नेपालीको कोरोना संक्रमणले ज्यान गएको हो । हालसम्म बेलायत, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड र स्वीडेन, ओमान लगायत देशमा रहेका नेपालीहरुको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ ।
एनआरएनए स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार यो साता विदेशमा मध्यपूर्वका देशबाहेक अन्य मुलुकमा कोरोना संक्रमणको बढ्ने दर न्युन हुदै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यो पनि पढ्नुहोस नेपालमा ३ जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस पुष्टि
समितिका अनुसार शनिवार साँझसम्म विदेशमा २८ हजार ९ सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने २५ हजार २ सय २६ जना गैरआवासीय नेपाली कोरोना मुक्त भएका छन् ।
नेपालमा १५ हजार ४ सय ९४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिए पनि हाल सम्म ६ हजार ४ सय १५ जना कोरोना मुक्त भएका छन् । यस्तै ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । एनआरएनएका अनुसार हाल सम्म विश्वभर ३७ देशमा रहेका नेपालीहरु कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएका छन् ।
Breaking News निराजन पौडेल - January 18, 2021
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - January 18, 2021
बिचार राजधानी समाचारदाता - January 18, 2021
माघेसंक्रान्ति र माघमहात्म्य
बिचार प्रेममान डंगोल - January 13, 2021
नेपालका आदिवासीहरूले आफ्नै संस्कार र परम्पराअनुरूप मौलिक रूपमा धुमधामसँगै मनाउँदै आइरहेको माघेसंक्रान्ति र माघेमेलाको महात्म्यको अत्यन्तै महत्व रही आएको छ । काठमाडांै उपत्यकाका आदिवासी...
सञ्चारकर्मी ज्ञवालीको ‘एक लभर’
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रामजी ज्ञवालीले नयाँ लघु चलचित्र ‘एक लभर’ दर्शकमाझ ल्याएका छन् । यो चलचित्र नेपालको वर्तमान सामाजिक परिघटनालार्य मध्यनजर गरेर तयार पारिएको...
पुर्खाकाे नासाे संरक्षणमा युवा पुस्ता
Editor-Picks प्रकाश आचार्य - January 16, 2021
बुटवल । ग्रामीण पहिचानका रूपमा प्रयोगमा आएका घरेलु प्रयोजनका कैयन सामग्री हराउँदै गएकोमा बुढापाका चिन्तित हुन थालेका बेला कतिपय युवाहरु आफ्ना पुर्खाले बनाएका र...
गाली गलौजको राजनीति
बिचार नगेन्द्रराज पौडेल - January 12, 2021
माओवादी द्वन्द्वका बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रकै शासानकालमा माओवादीले युद्ध विराम ग¥यो । ऊ अर्धभूमिगत भयो । मुख्य मुख्य सहरमा आमसभा ग-यो । पोखराको अमरसिंहमा आयोजित...
परिवारको आशा नै अस्पतालको शय्यामा ढलेपछि…
प्रदेश ४ रासस - January 18, 2021
बलेवा । परिवारको खर्च चलाउन लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा बसेका रामचन्द्र बोहरा दुई वर्ष पहिले घर फर्किए । शरीर अस्वस्थ भएर घर फर्किनुभएका बोहरालाई...
बैज्ञानिकले अन्तरिक्षमा फलाए गान्टे मुला (फाेटाेफिचर)
एजेन्सी - December 6, 2020
वैज्ञानिकले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा मूला फलाएक छन् । यसलाई सन् २०२१ मा धर्तीमा ल्याइनेछ । सन् २०२१ सम्म पृथ्वीमा २० वटा मुला ल्याउनका लागि...
कोरोनाको चपेटामा हलिउड सेलिब्रेटी
डब्बु क्षत्री - March 27, 2020
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण विश्वभरि फैलने क्रम जारी छ । यतिबेला यो संक्रमणबाट अमेरिका ग्रस्त छ । चीन र...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - October 30, 2020
जुम्ला । दोस्रोपटक कोरोना शून्य भएको जुम्लामा सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ । सुरक्षा सतर्कता नअपनाउँदा कोरोना सङ्क्रमणको ग्राफ बढेको विश्लेषकले बताउने गरेका छन् । यहाँका...
विश्वविजेता फ्रान्स सहज समूहमा
खेल एजेन्सी - December 8, 2020
जुरिच । एसियाली राष्ट्र कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप २०२२ का लागि युरोप क्षेत्रको समूह विभाजन गरिएको छ । सोमबार राति...
मुद्दाको पेसी प्रधानन्यायाधीश आफैंले तोक्लान् ?
Breaking News निराजन पौडेल - July 26, 2020
काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय काटिरहेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने सर्वोच्चको फैसलामाथि परेको पुनरावलोकन निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ...
बन रक्षक र तस्करबीच गोली हानाहान
Breaking News सुजीतकुमार झा - April 5, 2020
जनकपुरधाम । रौतहटको चोचा वन क्षेत्रमा वन रक्षक र तस्कर बीच दोहोरो गोली हानाहान भएको छ ।...
खाद्य कम्पनीको चामल खरिदमा चलखेल
Editor-Picks कौशिला कुँवर - September 3, 2020
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ५५ करोडको चामल खरिद गर्दा चलखेल भएको पाइएको छ । कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमै कम गुणस्तरको चामल खरिद...
भारतमा ‘कोभिड १९’ संक्रमितको संख्या ९ हजार नाघ्यो, ३०८ को मृत्यु
भर्खरै एएनआई - April 13, 2020
भारतमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितहरु थपिएकाे सोमबार जनाइएको छ । गएको २४ घन्टायता यहाँ ७ सय ९८ जना नयाँ संक्रमित थपिएको बताइएको...
५५ केजी भन्दा माथिका महिलाको प्रतियोगिता
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - January 18, 2021
काठमाडौं । मोडल सङ्स नेपालले आयोजना गर्दै आएको ‘सुपर प्लस साइज मोडल २०२१’ को दोस्रो अडिसन माघ १० गते हुने भएको छ । ‘अल...
तीन आयोजनाबाट ६ सय १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य
अर्थ तीन आयोजनाबाट ६ सय १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य - January 16, 2021
लमजुङ । विद्युत् नियमन आयोगले मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । कुल १...
सात महिनामा एउटै दर्ताको प्रक्रियामा आएनन्
Editor-Picks मधुजंग पाण्डे - January 13, 2021
काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारमा उपयोग हुँदै आएको सिपिङ कम्पनीको मनोमानी रोक्न सरकारले गरेको पहल असफल भएको छ । सरकारले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गराएर...
Not-to-be-missed एजेन्सी - January 15, 2021
नेपाली विद्यार्थीले खोजेका चार क्षुद्रग्रहले अस्थायी नाम पाए
राजधानी समाचारदाता - January 16, 2021
पेट्रोलियम पदार्थको आयात ११ प्रतिशतले घट्यो
कौशिला कुँवर - January 16, 2021
केही दिन हुस्सु र तुवाँलाे लाग्ने,पूर्वमा वर्षाकाे सम्भावना
यो पनि पढ्नुहोस सोलुखुम्बुमा आइचर दुर्घटना, तीनको मृत्यु